युक्तिहरु - मलेशिया - बातु गुफाहरु - 1aviagem.com
युक्तिहरु - मलेशिया - बेटु गुफाहरु
अघिल्लो पोस्ट: हंगेरीको साथ अन्तर्वार्ता - हंगेरी, अष्ट्रेलिया र ब्राजिलका लागि सिफारिसहरू।
अर्को पोस्ट: मलेशिया - पेट्रोनास टावर्स
पोष्ट गरिएको 30 नोभेम्बर 2018 द्वारा रोमोमो लुकाना
खैर, शुक्रबारको फाईदा लिन मलेशिया को बारे मा थोडा अधिक कुरा गर्छन। र यो देश "लिपिमा अनैतिक रूपमा" प्रवेश गर्न सोच्न। मलेशियाको बारेमा यो ब्लगमा पहिले नै दोस्रो पोस्ट। किनभने म साँच्चै सोच्न यो यसको लायक थियो। अनि आज हामी मलेसियाको दोस्रो भागमा पुग्छौं, बातु गुफाहरू पार गर्दै।
रेलगाडिको गुफाहरू (के.टी.एम.) मा पुग्न सम्भव छ, कुआलालम्पुर छोडेर। यो 15 किलोमिटर हो र अन्तिम स्टेशन हो। यो एक समय लाग्छ, तर यो यसको लायक छ।
यात्राको दौडान सुत्न पछि, यो राम्रो समय लाग्छ, यो व्यायाम गर्ने समय हो।
स्टेशन छोड्दै, तपाईंले पहिलो बंदर-हरी हराएको अभिभावकलाई पास गर्नु पर्छ। यो एक हिन्दु देवता हनुमान हो। यो पहिलो कुरा हो जसले तपाईंको आँखालाई समात्न सक्दछ, (तपाईले तपाईका अगाडि 15 मिटरको प्रतिमा देख्न सक्नुहुन्न) तपाईं सही बाटोमा जाँदै डराउनुहुन्न।
अब व्यायाम आउँछ, तपाईं जान्दछ कि व्यायामशालामा ढिलाइमा? हो, यो उठाउने समय हो। म यो कुरा गर्छु किनभने बातु गुफाहरू भेट्न तपाईंले 272 चरणहरूमा चढाउनु पर्छ। व्यायामको लागि राम्रो सीढ़ीको बारेमा सोच्नुहोस्!
नहीं, मैले चरणों को गिनती नहीं गरेको ... पहिले नै गणना गर्न सोचा र मध्य को बिल खो गयो?! तिनीहरूले सुधार्न र सीढीको पक्षमा कदमको संख्या लेखे। अब तपाईं निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं आउँदै हुनुहुन्छ वा छैन। (आई.ए.
यो सुनहरा अभिभावक मुरुगन हो, वास्तवमा उहाँ हिन्दू देवता हुनुहुन्छ।
2 अभिभावकहरु र एक सीढ़ी खींच पछि। यो दृश्यको आनन्द लिने बाँकी समय हो।
मलाई विश्वास छ कि यो दृष्टिकोणको इरादा बाकी भन्दा बढी उत्सुक छ। यसको मतलब तपाईं स्वर्गमा एक सिढीमा हुनुहुन्छ।
हाइलाइट गर्न एक विवरण यो छ कि गुफाको प्रवेश द्वार स्पष्ट छ, त्यो नि: शुल्क ... त्यहाँ पुग्न केहि किन्न कि खरीद गर्न को लागी धेरै मान्छे हुनेछ। लेट, तपाईंलाई किन्न छैन। तपाईं ट्रेन बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र सीधा जानुहोस्। संयोगमा, धार्मिक लेखका विक्रेताहरू सम्झने छैनन्। तर यदि तपाईं ठाउँको स्मारक खरीद गर्नुहुन्छ भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाइँ यसलाई फिर्तामा गरौं। (यसले वजन लिने देखि बचाउँछ)।
धेरै अन्य गुफाहरूको विपरीत, बेट गुफाहरू धेरै शहरीकृत हुन्छन्, अपेक्षाकृत फ्लैट फ्लोले गुफाको लागि फ्लैट फ्लुङ, र प्राकृतिक र मानव निर्मित रोशनीहरू। त्यो वास्तवमा तीन गुफाहरू सँगसँगै छन्। यो एक शानदार ठाउँ हो। र संरचना प्राकृतिक छ। सबैसँग एक गुफा सही छ। स्टटलैक्टाइट, नमी, चराहरू, बिरालोहरू, मकड़ीहरू, बन्दरहरू ...
बन्दरहरू?! हो, र तपाई तिनीहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ, ती साना चोरहरू जुन आउन चाहन्छन् र तपाईंको लंच, तपाईंको पर्स र तपाइँको सेलफोन चोर्ने हुन सक्छ। वास्तवमा, यो मेरो खाता थियो कि मैले मेरो जीवनमा सबैभन्दा विचित्र दृश्य देखे। एक व्यक्ति गुफा को stalactites को माध्यम ले एक डन फिल्म थियो जब एक बंदर महिला पर्स चोरी र चिल्लायो। स्थानीय संरक्षक मध्ये एक बन्दर तिर वर्महोल झुन्डिएको थियो, जसले सुरुवात गरे र ब्याप छोड्यो। तर जो मान्छे डन संग थियो (जस्तै गुफा को भित्र सबै को अन्य) डर गयो र गुफा को गुफा को छत मा दुर्घटनाग्रस्त भयो! गंभीरतापूर्वक, तपाईं एक स्निपर फेंक गर्न को लागि एक गुफा भित्र कहिले कल्पना गर्नुहुन्छ? कस्तो विचार हेर्नुहोस्? त्यसैले अतिरिक्त टिप भनेको: गुफामा डन नदिनुहोस्।
बातु गुफाहरू पवित्र स्थानहरूको एकाग्रता छ याद राख्नुहोस्, यसैले यदि तपाईं हिन्दू वेदीहरू सम्म जानुहुन्छ भने तपाईले आफ्ना जूताहरू लिनु पर्छ। वास्तव मा यो एशिया मा एक अनुकूलन छ, सामान्यतया कुनै पनि भवनमा प्रवेश गर्नु अघि आफ्नो जूताहरू लिनुहोस्।
यद्यपि3गुफाहरु सँगै सँगै दुई घण्टा घटेको यो यात्रा पुरा गर्न सम्भव छ। बिल्लियों र मकवानिहरु को बारे मा, उनि तीन गुफाहरु (गाढा गुफा) मध्ये एक मा अधिक केंद्रित हुन्छन्। यस गुफामा तपाईंले प्रवेश शुल्क तिर्नु पर्छ। र त्यहाँ एउटा ठूलो चिन्ह तपाईं बताउनुहुन्छ कि त्यहाँबाट तपाईं बाटोमा भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ रोशनीहरूमा कुनै राम्रो मोडले छतमा संकेत गरिरहेको छैन, वा तपाईं बिल्लहरू उडाउनुहुनेछ। र यदि तपाईं मकड़ीबाट डराइरहनुहुन्छ भने, म पनि प्राप्त गर्न सिफारिस गर्दैन ... तिनीहरू केवल यो अन्तिम गुफामा छन्, अन्धकार, केवल एक छ कि छतमा स्किथलाइट वा मन्दिरहरूको रोशनी छैन।
खैर, यदि तपाईले यो लिपिको आफ्नो स्क्रिप्टमा राख्नुहुन्छ खुला दिमाग संग, बिना यो अनुकूल वा स्क्रोल गर्ने। वास्तवमा, क्वालालम्पुरमा यो विविधता मेरो ध्यानमा राखिएको कुरा थियो, त्यहाँ एक विशाल धार्मिक विविधता छ। ईसाई, इस्लामवाद, बौद्ध, हिन्दूबाट ... मलाई आशा छ कि यस सम्बन्ध अर्को अगमवक्ताहरूको लागि जारी रहनेछ।
ठीक छ, फिर्ता जाने समय। 272 चरणहरूको सीढ़ी सम्झनुहोस्? हां, छाडहरूमा बल उहाँ अझै त्यहाँ हुनुहुन्छ र यो तल हटाउनको लागि समय हो।
अर्को पोस्टमा म मलेशियाको बारेमा कुरा गरिरहनेछु।
र मलेशियामा पहिलो पटक नाविकको लागि अन्तिम टिपको रूपमा जुन उसको भित्र वा छिमेकी देश भित्र जान्छ, म बेवास्ता लिङ्क छोड्छु जसमा यो एकदम सरल र अनलाईन यात्रा अनुसूची गर्न सजिलो छ।
टिप्पणी, तपाईले फ्ल्याग क्लिक गरी भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
अर्को पटक हेर्नुहोस्। (आई.ए.
केही थप संसारको बारेमा जान्न विश्वप्यापी नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्, यात्राको नछोड्ने ब्लगको आनन्द र सदस्यता लिनुहोस्।
कसरी asia Batu गुफाहरु गुफा सीढ़ी स्वर्गमा हनुमान हिन्दुहरू कुवलालम्पुर मालासिया मुरुगन मन्दिरहरू